छोरी जन्माईन भन्दै श्रीमान बेपत्ता, आमाछोरीको बिजोग, आमाछोरी रुदै पहिलो पटक मिडियामा (भिडियो) – Etajakhabar
काभ्रेका विश्वनाथ थापासंग केही वर्ष अघि विवाह गरेकी सुस्मिता थापा अहिले काखमा सानो बच्चा लिएर भक्तपुरमा अलपत्र छन् । उनका श्रीमानले छोरी जन्माएको भन्दै अलपत्र छोडेर बेपत्ता भएपछि उनको दिन पीडामा बितेका छन् । आफ्नो परिवारको सुखका लागि भन्दै विदेश गएका उनी घरमा छोरी जन्मिएको थाहा पाएपछि उतैवाट बेपत्ता भएका हुन् । उनी विदेशवाट घर आउन भनेर विमानस्थलसम्म आएको उनका साथीहरुले बताएका छन् । विमानस्थलसम्म छोड्न आएका साथीहरुले घर हिडेको बताउँछन् तर उनी घर आइपुगेका छैनन् । गएको १० तारिख विदेशवाट नेपाल हिडेको भए पनि उनले सुस्मितासंग आएनन् ।
बच्चा नजन्मदा सम्म निकै माया गर्ने श्रीमान छोरी जन्मिए पछि एक्कासी परिवर्तन भएको उनले बताइन् । बच्चा पेटमा हुँदा छोरा जन्माउनुपर्छ भन्दै दवाव दिने गरेका उनी छोरी जन्मिएपछि टाढा भएको उनले बताइन् । पेटमा बच्चा हुँदा भिडियो कल गर्दा मेरो छोरालाई कस्तो छ ? भनेर सोधिरहन्थे तर छोरी जन्मिएपछि फोन गर्न छोडेको उनले बताइन् । सुत्केरी हुने बेलामा घरका सासु ससुराले माइत नजाउ भनेका थिए तर श्रीमानले नै घरमा बुवा आमा वृद्ध हुनुहुन्छ त्यसैले माइतनै जाउ भनेर पठाएको उनको भनाई छ । माइत गएर बच्चा जन्माएको सुस्मिताको भनाई छ । अहिले छोरी चार महिनाकी भइन् श्रीमानले सम्पर्क गर्न छोडेको पनि चार महिना भएको उनले बताइन् ।
यो पढ्नुहोस ! सर्वाधिक खाेजीकाे सूचीमा सनी लियोन, माेदीलाई समेत पछि पारिन्
मुम्बई – पो९र्न स्टारको छवी मेटाउँदै बलिउडमा प्रवेश गरेकी सन्नी लियोन गुगल सर्चमा सर्वाधिक खोजी भएकी छन्। भारतीय प्राधनमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित बलिउडका सुपर स्टारलाई समेत उनले पछि पारेकी छन्। पछिल्लो समय भारतको प्रशारित क्षेत्र काश्मीर घ९टनालाई जोडेर मोदीको राष्ट्रियदेखि अन्र्तराष्ट्रिय संचारमाध्यममा व्यापक चर्चा भएको थियो। तर मोदीको चर्चा जति भए पनि सन्नीले उनलाई उछेटेकी छन्। गुगल सर्चका क्रममा अगस्टको पहिलो सातासम्म उनी भारतमा सबैभन्दा बढी सर्च गरिने व्यक्तिमा पहिलो स्थान हासिल गरेपछि अहिले राष्ट्रियदेखि अन्र्तराष्ट्रिय संचारमाध्यममा चर्चा भइरहेकोे छ।
सनीले भारतीय संचारमाध्यमलाई भनेकी छिन्, ‘मेरो टिमले यो खबर दिएपछि मलाई धेरै खुसी लागेको छ ।’ यस सूचीमा मोदीसहित बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खानजस्ता स्टार पनि पछि परेका छन् ।भारतको मणिपुर र असमवासीले सनीलाई सबैभन्दा बढी सर्च गरेको समाचार भातरीय संचारमाध्यले जनाएका छन्।
Posted on: Monday, August 19, 2019 Time: 15:55:24